The Motorola Moto G Pro na-enweta ihe gam akporo 11 melite | Gam akporosis
Moto G Pro bụ ekwentị Motorola mbụ iji nweta mmelite gam akporo 11
Motorola abụwo otu n'ime ndị nrụpụta ama ama ole na ole ruo ugbu a emelighi mkpanaka gaa gam akporo 11. Nke a abịala na njedebe n'ihi eziokwu ahụ bụ Moto G Pro anabatala mmelite ngwanrọ dị otú ahụ.
A malitere smartphone a na May nke afọ gara aga na gam akporo 10 nke dị n'okpuru usoro gam akporo One, nke na-enye ya ihe ùgwù nke ịbụ otu n'ime ọdụ mbụ iji nweta mmelite kachasị ọhụrụ na nke kachasị elu na gburugburu ebe obibi gam akporo. Ya mere, gam akporo 12 na-ekwekwa nkwa otu ihe ahụ n'ọdịnihu.
Gam akporo 11 update biara na Motorola Moto G Pro
Dabere na peeji nke mmelite nsuso ụlọ ọrụ na ọtụtụ ndị ọrụ ọgbakọ, Motorola Moto G Pro na-enweta mmelite gam akporo 11 na UK. N'oge a, obodo a yiri ka ọ bụ naanị ya ka ọ na-agbasa site na OTA. Agbanyeghị, n'ime ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu ole na ole ọ ga-achụsasị ụwa niile.
El Jenụwarị nche patch a gụnyere ya na ngwungwu ngwa ngwa ọhụụ maka ama dị n'etiti, yana ọtụtụ obere ndozi ahụhụ, ndozi ndozi, na njikarịcha dị iche iche. Na mgbakwunye, ibu nke mmelite ahụ bụ 1.103,8 MB; A na-atụ aro ka ibudata ya site na njikọ Wi-Fi siri ike na ngwa ngwa, iji zere oriri achọghị nke ngwugwu data mkpanaka.
Dị ka nyocha dị mfe, ekwentị na-abịa na ihuenyo 6.4S nke anụ ọhịa IPS LCD 665-inch nwere mkpebi FullHD +, Qualcomm's Snapdragon 4 processor chipset, 128 GB nke RAM, 4.000 GB nke ebe nchekwa dị n'ime ya na batrị 15 mAh. Ikike nwere nkwado maka ngwa ngwa. odori nke XNUMX W.
O nwekwara 48 MP (isi) + 16 MP (obosara) + 2 MP (nnukwu) igwefoto okpukpu atọ yana ihe mmetụta 16 MP selfie dị na oghere na ihuenyo ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Moto G Pro bụ ekwentị Motorola mbụ iji nweta mmelite gam akporo 11
321 Shotout bụ onye ọgbụgba egbe amachibidoro ọrụ, mana ọ na-egbu egbu
Xiaomi gbara gọọmentị US akwụkwọ maka itinye ya na ndepụta aha ya